I-United Airlines ihlela uhlelo olukhulu lwasekhaya kusukela ngoMashi 2020
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-United Airlines ihlela uhlelo olukhulu lwasekhaya kusukela ngoMashi 2020
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
Inkampani yezindiza izondizisa izindiza zasekhaya ezingama-3,500 91 nsuku zonke ngoDisemba - okuthe xaxa selokhu kuqale ubhadane kanye no-2019% wohlelo lwasekhaya lwangoDisemba XNUMX - ukuxhasa ukwanda okulindelekile kwesidingo sokuhamba ngamaholide.
Uhlelo lukaDisemba lubandakanya ukuxhumana okusha phakathi kweMidwest kanye nemizi yesimo sezulu esifudumele njengeLas Vegas ne-Orlando.
Uhlelo olusha lubandakanya cishe izindiza ezingama-70 zansuku zonke zokushushuluza izindawo, kufaka phakathi insizakalo entsha phakathi kwe-Orange County ne-Aspen.
Ngokusho kwe-United Airlines, ukuseshwa kwezindiza ngamaholide kwiwebhusayithi ye-United nakuhlelo lokusebenza lwendiza kukhuphuke ngo-16%, uma kuqhathaniswa no-2019.
I-United Airlines namuhla imemezele ukuthi izondizisa uhlelo lwayo olukhulu lwasekhaya selokhu kuqale ubhadane ukuhlangabezana nokwanda okulindelekile ekuhambeni kwamaholide, kugcizelelwa ukuxhuma iMidwest namadolobha esimo sezulu afudumele njengeLas Vegas ne-Orlando kanye nokunikela cishe cishe ngama-70 nsuku zonke izindiza eziya ezindaweni zokushushuluza, kufaka phakathi insizakalo entsha phakathi kwe-Orange County ne-Aspen.
Ngokuvumelana ne Lufthansa, ukuseshwa kwendiza yezikhathi zokuvakasha kuyi-union.com nohlelo lokusebenza lwendiza yezindiza lenyuke ngo-16%, uma kuqhathaniswa nango-2019. Inkampani yezindiza ilindele ukuthi izinsuku zokuhamba ezimatasa kakhulu eholidini le-Thanksgiving zizoba ngoLwesithathu, Novemba 24 nangeSonto, Novemba 28, kanti izinsuku ezidumile zasebusika ukuvakasha kwamaholide kulindeleke ukuthi kube ngoLwesine, Disemba 23 nangeSonto, ngoJanuwari 2.
Inkampani yezindiza ihlela ukunikela ngezindiza ezingaphezulu kwezingu-3,500 91 zansuku zonke ngoDisemba, ezimele u-2019% wamandla wasekhaya uma kuqhathaniswa nango-XNUMX.
"Sibona izidingo eziningi ezibekiwe emininingwane yethu futhi sinikela ngohlelo lukaDisemba olugxile ezintweni ezimbili abantu abazifuna kakhulu ngamaholide: ukukhanya kwelanga okufudumele neqhwa elisha," kusho u-Ankit Gupta, iphini likamongameli wezokuhlela inethiwekhi nokuhlela ku- Lufthansa. "Siyazi ukuthi imindeni nabangani bazimisele ukuhlanganisa kabusha lesi sikhathi samaholide, yingakho sijabule ngokwengeza izindiza ezintsha ezizobasiza ukuthi baxhumane futhi bagubhe ndawonye."
NgoDisemba, i-United izoqala izindiza ezintsha eziqonde ngqo Las Vegas nePhoenix esuka eCleveland, nase Orlando kusuka e-Indianapolis. Isithwali sizophinda siqale kabusha izindiza eziyisishiyagalombili ezithandwayo eziqonde ngqo ezisuka emadolobheni aseMidwest, kufaka phakathi imizila eya eFort Lauderdale, Fort Myers, Orlando naseTampa, okunikeza ukuhamba okuthe xaxa inkampani yezindiza eye yasuka eCleveland kusukela ngo-2014 kufaka phakathi isevisi eqonde ngqo eNassau naseCancun. I-United izonikela ngezindiza eziyi-195 zansuku zonke eziya ezindaweni eziyi-12 eFlorida kulobu busika, izindiza eziningi eziya eSunshine State emlandweni wenkampani. I-United ibuye iqale kabusha izindiza eziqonde ngqo ezisuka eColumbus, e-Indianapolis, eMilwaukee nasePittsburgh ziya eFort Myers - ebezingezinye zezindiza zezindiza ezazithandwa kakhulu ebusika obedlule.
Amakhasimende akhetha i-powder entsha angajabulela izindiza eziningi ukushushuluza izindawo eziya e-United kunanoma isiphi esinye isithwali. Inkampani yezindiza inikela ngezindiza ezingama-66 zansuku zonke eziya ezindaweni ezingaphezulu kweshumi nambili e-US, kufaka phakathi insizakalo entsha sha eqala ngalo Disemba phakathi kwe-Orange County ne-Aspen. Ngalesi sikhathi sasebusika, i-United izoba nezindiza eziya e-Aspen / Snowmass, eMammoth, eBozeman / Big Sky, ku-Eagle / Vail, eKalispell, eGunnison / Crested Butte, eHayden / Steamboat Springs, eJackson Hole, eMontrose / eTelluride, eReno / Tahoe, eSun Valley kusuka izikhumulo zezindiza zalo.